IMadagascar Visa | Faka isicelo kwi-Intanethi yeVisa yokufika | natvisa.com
Isicelo seMadagascar Visa kwi-Intanethi
Ukutyelela eMadagascar kwenziwa lula kakhulu ngokuqaliswa kwe-eVisa yabakhenkethi (iSigunyaziso sokuHamba). Inkqubo ivumela abahambi ukuba bagqibe onke amanyathelo okufaka nokufumana olu xwebhu kwi-Intanethi. Abantu bacwangcisa uhambo oluya eMadagascar kufuneka bafake isicelo seLungelo lokuGunyazisa kwi-Intanethi kwaye banamathisele amaxwebhu afunekayo. Nje ukuba isicelo siqhubekisiwe, ugunyaziso lweLinging luzakuthunyelwa nge-imeyile. Abahambi kufuneka baprinte olu xwebhu kwaye balunikezele kwigosa lokufuduka, emva koko i-eVisa iya kuthi inikezwe umntu lowo kwaoko. Le yenye yeendlela ezilula nezilula zokufumana i-visa, ke ngoko ke abantu abavela kumazwe aliqela banokufumana esi sibonelelo.
Iindidi zeVisa zaseMadagascar
Ugunyaziso lokwenza indawo Imeyli - Ukuya kwi-30 okanye kwi-60 yeentsuku enye Ayikho
Ugunyaziso lokwenza indawo
Abahambi abacwangcisa uhambo oluya eMadagascar kufuneka babe namaxwebhu ayimfuneko okufumana i-visa yabo (i-visa ifunyanwa xa ufika). La maxwebhu aquka; incwadi yokundwendwela esemthethweni kunye noxwebhu lokugunyazisa ukuHamba. Ukusilela ukubonelela ngala maxwebhu kunokubangela ukwaliwa kwe-visa eMadagascar. Ukongeza kula maxwebhu, abafaki-zicelo kufuneka babe ne-imeyile efanelekileyo ye-Id. Nasiphi na isaziso esimalunga nokuqinisekiswa okanye ukwaliwa koGunyaziso loMhlaba siya kuthunyelwa kule imeyile.
Enye yezona mfuno zibalulekileyo zokufumana i-eVisa eMadagascar yipasipoti efanelekileyo. Xa ufaka isicelo se-eVisa, incwadana yokundwendwela kufuneka isebenze kwifayile ye- ubuncinci bexesha leenyanga ezintathu. IMadagascar eVisa ivumela abahambi ukungena kube kanye. Le visa iya kuvumela iindwendwe ukuba zihlale eMadagascar ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-30 okanye iintsuku ezingama-60, kuxhomekeke kwivisa.
Xa ufika kwisikhululo senqwelomoya saseMadagascar, elinye lamaxwebhu abaluleke kakhulu ekufuneka ubenayo, yipasipoti. Kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Ipaspoti kufuneka inamaphepha ama-3 angasetyenziswanga ngenjongo yokunyathela isitampu.
Umbhali weLing. Intlawulo yeVisa
Ababhenkethi kufuneka baphathe uxwebhu lwabo lokuGunyazisa ukuHamba xa besiya eMadagascar. Bayacelwa ukuba babonise olu xwebhu kwabasemagunyeni kunye nencwadana yokundwendwela. Nje ukuba bajonge amaphepha, iindwendwe zinokufumana i-visa yazo emva kokwenza intlawulo efanayo.
Nje ukuba abahambi bafika kwisikhululo senqwelomoya saseMadagascar, kufuneka kuthengwe i-visa kusetyenziswa iMalagasy Ariary, iiYuro okanye iidola zaseMelika. Amakhadi etyala awamkelwa.
Iinkcukacha zeMadagascar Visa
Yintoni iMadagascar eVisa (iSigunyaziso sokuHamba)?
Ukutyelela ilizwe langaphandle kufuna ukuba ufumane imvume yokuhamba usiya kwilizwe oya kulo. Olu xwebhu lokuhamba luhlala lubizwa ngokuba yiVisa lolunye lawona maxwebhu abaluleke kakhulu ekuhambeni ekufuneka ungene kwilizwe langaphandle. Ukufumana olu xwebhu, nangona kunjalo, yinkqubo ende kwaye edinayo, njengoko kufuneka uye kwindlu yozakuzo yelizwe oceba ukundwendwela kwaye uzalisekise yonke inkqubo echitha ixesha ulapho.
IRiphabhlikhi yaseMadagascar yazisa ngenkqubo ye-elektroniki ngo-2017, evumela abahambi ukuba bafumane i-visa yabo yeTyelelo xa befika. Ukufaka isicelo kunye nokubhaliswa kwesigunyaziso selungelo lokugcwalisa kunokugqitywa kwi-intanethi.
Amanyathelo okufaka isicelo se-eVisa yaseMadagascar (Ugunyaziso lwendawo)
Yonke inkqubo yokufumana ugunyaziso lweLingini ukuya eMadagascar ilula kwaye ilula. Unokufumana uxwebhu oluyimfuneko lokuhamba ngamanyathelo amane alula.
Gcwalisa iFomu yesicelo: Inyathelo lokuqala ekufumaneni ugunyaziso lokuLawula ukuya eMadagascar kukugcwalisa le fomu. Ukulungiselela oko, abafaki zicelo kufuneka benze i-akhawunti kwiwebhusayithi karhulumente kwaye babhalise. Emva koko kuya kufuneka bazalise ifom yesicelo. Abafakizicelo kufuneka baqinisekise ukuba lonke ulwazi olwenziweyo luchanekile.
Qinisekisa iMihla yokuHamba: Inyathelo lesibini lifuna abafaki-zicelo baqinisekise imihla yabo yokuhamba kunye nenani leentsuku abaceba ukuhlala kuzo.
Fumana ugunyaziso lwendawo yokuhlala: Emva kokuba kugqitywe ukwenziwa kwefom yesicelo, abafaki-zicelo bayakufumana ugunyaziso lokwenza indawo. Oku kufuneka kuziswe kwigunya lokufika kwabantu kwisikhululo seenqwelomoya.
Hlawula ngokufika: Nje ukuba abasemagunyeni kwisikhululo seenqwelomoya bahlole uxwebhu lweSigunyaziso sokuHamba, abahambi bayacelwa ukuba bahlawulele i-Visa emva koko i-eVisa iya kuthi inikezwe ngoko nangoko. Intlawulo ye-visa inokwenziwa kusetyenziswa iMalagasy Ariary, ii-Euro okanye iiDola zaseMelika. Amakhadi etyala awamkelwanga njengendlela yokuhlawula.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo kwi-eVisa eya eMadagascar
Ukuba nenxaxheba kweVisa yokuLanda kunika undwendwe ilungelo lokungena kweli lizwe. Amagunya okufudukela kwelinye ilizwe anelungelo lokwala ukungeniswa kwakhe nabani na ngokokubona kwakhe.
Uxwebhu lweGunya lokuGunyazisa lukhutshwa kuphela ngenjongo yokhenketho. Abantu abatyelele eMadagascar nale visa abavumelekanga ukuba benze umsebenzi okanye bavule ishishini.
Wonke umntu ongena eMadagascar kufuneka abe ne-Visa yakhe. Nangona kunjalo, abahlali basePalestina abavumelekanga ukuba bafake izicelo zokuGunyazisa i-eVisa Landing Authorization ukuya eMadagascar.
Kucetyiswa ukuba ufake isicelo se-visa okungenani kwiintsuku ezi-4 ngaphambi komhla wohambo.
I-eVisa yabakhenkethi eMadagascar ivumela abatyeleli ukuba bahlale kweli lizwe ixesha elingangeentsuku ezingama-30 0r 60, kuxhomekeka kwi-visa.
Yintoni iVisa yabakhenkethi eMadagascar?
Uxwebhu lokuhamba olunokufumaneka kwi-Intanethi. Urhulumente waseMadagascar wazise le nkqubo intsha ukuze abahambi bafumane imvume yabo yokuhamba ngokulula.
Buyintoni ubunyani beMadagascar eVisa?
Emva kokuba isicelo se-visa sigqityiwe kwaye i-eVisa inikiwe, isebenza iintsuku ezingama-30 okanye ezingama-60. Oku kuxhomekeke kuhlobo lwevisa omfake isicelo.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo, ukufaka isicelo se-eVisa yaseMadagascar (iSigunyaziso sokuHamba)?
Awudingi ukubonelela ngalo naluphi na uhlobo loxwebhu xa ufaka isicelo kwi-Intanethi sokugunyazisa ukufika. Nangona kunjalo, kuya kufuneka unencwadana yokundwendwela esemthethweni.
Ngaba kufuneka ndihambe nawo nawaphi na amaxwebhu xa ndifika eMadagascar?
Ewe, kufuneka ube uneSigunyaziso soMhlaba ovunyiweyo kunye noxwebhu olusemthethweni lokuhamba kunye nawe njengoko kuya kufuneka ubabonise kwabasemagunyeni.
Hayi, ukuba isicelo se-eVisa siyaliwa, awuyi kufumana mbuyekezo.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelwe yenye ye-eVisa yaseMadagascar?
Umhambi one-eVisa yaseMadagascar uya kuvunyelwa kuphela ukungena kube kanye.
Yeyiphi imihlali ipaspoti yam ekufuneka ihlangane nayo ukuze ufake isicelo se-eVisa eya eMadagascar?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa esiya eMadagascar, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni ixesha elingangeenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu. Kufuneka okungenani ibe namaphepha ama-3 angasetyenziswanga.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo ukuhlawula umrhumo weMadagascar eVisa?
Abatyeleli banokukhetha ukuhlawula besebenzisa iidola zaseMelika, iMalagasy Ariary okanye i-Euro. Amakhadi etyala awamkelwanga njengendlela yokuhlawula.
Ndizokwazi njani ukuba isicelo sam se-visa (ukugunyaziswa koMhlaba) siqhubekile?
Naluphi na uhlaziyo olunxulumene nesicelo sakho (Ugunyaziso loMhlaba) luya kuthunyelwa ngeposi.
Uya kufumana i-visa yakho ukufika kwakho eMadagascar. Uya kucelwa ukuba ubonise ukugunyaziswa kokufika kwakho kwikhawuntara yokufudukela kwelinye ilizwe.